Wararka Maanta: Khamiis, Jun 14, 2018-Lugtii ugu horeysay Koobka Kubadda Cagta Aduunka oo maanta la cayaarayo
Waxaa lagu wadaa in furitaanka tartanka uu ka qeybgalo madaxweyne Vladimir Putin, waxaana ay munaasabadu ka dhaci doontaa garoonka Luzhniki Stadium oo ku yaalla magaalada Moscow.
Russia ayaa waxaa ay qabashada koobka adduunka ku bixineysaa 13 bilyan oo dollar, ayada oo kulmada ay ka dhacayaan 11 magaalo oo marti-gelinaya.
Kulmada is-aragga hore ayaa soconaya illaa 28-ka June, halka kuwa is reereebka ay ay billaabanayaan 30-ka June. Cayaarta kama dambeysta ah ayaa dhaceysa 15-ka July.
Brazil, France, Spain, Argentina iyo dalka koobka difaacanaya ee Germany ayaa ka mid ah dalalka aadka loogu saadaalinayo in ay koobka hantaan.